बेलायतका राजकुमार ‘ह्यारी’ के गर्दैछन् नेपालमा ? | We Nepali
बेलायतका राजकुमार ‘ह्यारी’ के गर्दैछन् नेपालमा ?
वीनेपाली | २०७२ चैत ५ गते ११:४६
काठमाडौँ, ५ चैत । बेलायतका राजकुमार हेनरी चाल्र्स अल्वर्ट डेभिड ‘ह्यारी’ नेपालको औपचारिक पाँचदिने भ्रमणमा भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।
यसपछि राजकुमार ह्यारी गत वैशाख महिनामा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुरयाएका ललितपुर र भक्तपुरका स्थलको भ्रमणमा निस्कनु हुनेछ । यसक्रममा उहाँले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक पाटन दरबार स्क्वायरमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलमा भएको क्षतिको अवलोकन गरी जानकारी लिनुहुने छ । साथै उहाँले नागबहालस्थित ‘गोल्डेन टेम्पल’को अवलोकनसमेत गर्नुहुनेछ ।
पर्वतीय पदयात्रामा सौखिन ३२ वर्षीय राजकुमार ह्यारी सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखराको प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्न त्यसतर्फ जानुहुने यहाँस्थित बेलायती दूतावासले जनाएको छ । त्यहाँ रहँदा उहाँले वीरता र पराक्रममा ख्याति कमाएका गोर्खा सैनिकका परिवारजनसित भलाकुसारी गर्नुहुनेछ । साथै गोर्खा सैनिक कल्याणकारी कोषले भूकम्पले क्षति पुरयाएका संरचना निर्माणसम्बन्धी जानकारीसमेत लिनुहुनेछ । ‘जहाँ गोर्खा सैनिक छन् त्यहाँ सुरक्षाको कुनै चिन्ता छैन’ भनेर गोर्खा सैनिकको बहादुरी र इमान्दारिताको राजकुमारबाट उच्च प्रशंसा हुँदै आएको छ ।
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथबाट सन् १९६१ र १९८६ मा दुई पटक नेपालको भ्रमण भयो भने युवराज चार्ल्स, युवराज्ञी डायना, राजकुमार फिलिपले नेपालको यात्रा गरिसक्नुभएको छ ।